Velona… miara-monina fa tsy mifanilikilika | NewsMada
Velona… miara-monina fa tsy mifanilikilika
Par Taratra sur 16/06/2020
Mivaha tanteraka izao ny fihibohana noho ny hamehana ara-pahasalamana, afa-tsy ny faritra Analamanga sy ny distrika efatra any amin’ny faritanin’i Toamasina. Ho resy amin’izay koa ny valanaretina Covid-19? Miankina amin’ny ataon’ny tena. Ny tsy fitandremana ataon’ny olom-bitsy no mety hitera-doza lehibe ho an’ny maro.
Soa ihany, tsy mitsaha-mitombo ireo marary sitrana; eny, na mitombo isa aza, ohatra, ireo olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus. Azo lazaina fa voafehy ny valanaretina, raha jerena amin’ny isan’ireo marary mbola tsaboina sy namoy ny ainy. Tsy mitovy amin’izay hita any amin’ireo firenen-dehibe. Tombondahy lehibe izay?
Na izany aza, mbola ady manokana mila hatrehina ny fisian’ny fanilikilihana afitsoky ny sasany amin’ireo marary efa hoe sitrana tanteraka izao: tsy mitondra tsimokaretina intsony ka tsy ahina na atahorana hamindra. Nefa tsy izay loatra no andraisana azy ireny eny anivon’ny fiarahamonina: fanahy iniana, fiheveran-tena diso, tsy fahalalana… ?
Mafy no ho ny aretina fony mbola notsaboina no zakain’ireo marary sitrana tanteraka noho ny fanilikilihana. Inona no (h)atao? Fantatra izao fa aretina azo sorohina tsara ny Covid-19, azo tilina, azo tsaboina, tsy mitaiza, tsy manaranaka… Mbola mila ezaka be ny fanazavana sy fandresen-dahatra ny amin’izany mba tsy hisian’ny fanilikilihana.
Tsy izay tsy manaja sy mampihatra ireo fepetra fiarovan-tena sy fiarovana ny hafa amin’ny tsimokaretina Coronavirus ve, ohatra, no tokony ho voailikilika ho azy eo anivon’ny fiarahamonina? Mora ifindran’ny tsimokaretina ho azy tsinona ary mety mamindra, fa tsy izay efa salama azo antoka fa tsy mamindra intsony no ailikilika.
Mbola azo iainana sy ivelomana finaritra ve, ohatra, ny fiarahamonina raha anaovana fanilikilihana avokoa izay mety ho manahirana na hafahafa amin’ny tena? Velona hiara-monina ny rehetra, mifameno fa tsy mifamono an-toerana. Mbola karazana tsimokaretina eo anivon’ny fiarahamonina ny fanilikilihana? Mila fitsaboana…